FileMaker ikozvino Claris | IPhone nhau
FileMaker ikozvino Claris
Paunenge uchigadzira mafomu eIOS nhare mbozha, Apple inotipa akasiyana maturusi zvinoenderana nerudzi rwechikumbiro chatinoda kugadzira. FileMaker ndomumwe wavo, zvisinei hazvo haina kuitirwa kana kugadzirirwa kuita chero rudzi rwekushandisa kana mitambo.
FileMaker, chishandiso chakasimba chekutungamira data, icho chiri cheApple. Iyo kambani yakazivisa kuti kubva zvino zvichienda mberi haichadaidzwizve. Zita rake idzva, raasiri chaizvo, ndiClaris, zvaidaidzwa nekambani iyi Apple payakaitenga muna 1986 kwemakore maviri gare gare kushandura zita rekuti FileMaker.
Parizvino FileMaker ine zvinopfuura Makumi makumi mashanu evatengi uye vanopfuura mamirioni vashandisi vekupedzisira iyo yakatendera kuti igare iri kambani inobatsira kwemakore makumi maviri apfuura.
Zita rinochinja inopindirana neazvino kutora kwakaitwa nekambani: Stamplay, sevhisi inobatsira makambani eese saizi kusanganisa data kubva kune yechitatu-bato gore masevhisi, akadai seBhokisi, DocuSign, nezvimwe.
Kutanga kwe Claris Unganidzo, sevhisi iyo ichapa vatengi iyo intuitive interface yekugadzirisa mashandiro ebasa egore-based services, kuvaponesa nguva pabasa rekuvandudza tsika backend kusanganisa.
Claris Connect ichatungamirwa neyaimbova Stamplay CEO, uyo anoti:
Claris anobva muchiLatin mudzi "clarus", zvinoreva kuti yakajeka, yakajeka uye inopenya. Hapana chinhu chinopfupisa chinangwa chekambani zvirinani: kupa vanogadzirisa matambudziko nemhinduro dzakanaka dzinoshandira bhizinesi ravo Nekuwedzera kusvika kwepuratifomu yedu uye nekuiita mubatanidzwa wemazuva ano, wakawanda uye une simba wemuno maitiro maapplication uye yechitatu-bato masevhisi, vatengi vedu vanozokwanisa kufambisa yavo bhizinesi maitiro kuburikidza neyegore-based masevhisi avanoshandisa mazuva ese.
Claris inowanikwa seye app ine kubhadhara kamwe-nguva kana kuburikidza nekunyorera kwegore (hunhu hwakanyanya kusarudzwa nevashandisi). Parizvino, yepamutemo FileMaker webhusaiti inoenderera ichidaidzwa nenzira iyi. Shanduko yezita ichaitika zvishoma nezvishoma mumwedzi inotevera apo kambani ichiri kuenderera mberi nekuita basa rinodiwa rekusimudzira neruzivo kuitira kuti vashandisi vanozvitsvaga vatende kuti zvanyangarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » FileMaker ikozvino Claris
duberney sarmiento moreno akadaro
Ndinoyeuka ndichishandisa Claris filemaker 2.0 kana 2.1 Ini ndinorangarira chaizvo icon yacho yaive chivakwa chakaita seyakagadzika, kabhainari yekufaira neimwe yemadhirowa ayo akavhurwa.
Kubva nguva idzo ndanga ndichishandisa icho chigadzirwa.
Shandisa Claris Filemaker 3.0, iyo yakazotevera mushanduro yechina yakanga isisiri kunzi Claris asi Filemaker Pro.
Ini ndashandisa ichi chigadzirwa kubva 2.1 kusvika mushanduro 18
Pindura kuna duberney sarmiento moreno
Apple TV + inotsigira kutarisa kwekunze uye kudzora hova dzakafanana
Maitiro ekumisikidza Apple Music pane yako Amazon Echo uye Alexa